न्यूज सञ्जाल: » क्रिकेट टोलीको स्वागतमा को–को जाँदैछन् विमानस्थल ?
क्रिकेट टोलीको स्वागतमा को–को जाँदैछन् विमानस्थल ?
न्यूज सञ्जाल २१ माघ २०७५, सोमबार १२:४२
काठमाण्डाै – यूएईविरुद्धको एकदिवसीय र टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृङ्खला जितेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली साेमबार स्वदेश फर्कंदै छ । दुईवटा श्रृ‌ंखला जितेर फर्किएको नेपाली टाेलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागतको तयारी भइरहेको छ ।
लामिछाने बिग ब्याश लिग खेल्न संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट अष्ट्रेलिया जाने भएका हुन् । उनी यो लिग बीचमै छोडेर बीपीएलका लागि बङ्गलादेश गएका थिए । बङ्गलादेशबाट राष्ट्रिय टोलीबाट यूएईमा तीन एक दिवसीय र तीनवटा टि–२० शृङ्खला खेलेका उनी पुनः अष्ट्रेलिया जान लागेका हुन् ।
अष्ट्रेलियामा जारी बिग ब्याश लिगमा सन्दीप मेलबर्न स्टार्सबाट खेलिरहेका छन् । बिग बासको शुरुआती चार खेल खेलेर सन्दीप बङ्गलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) लिग खेल बङ्गलादेश आएका थिए ।
घरेलु टोली यूएईविरुद्ध नेपालले तीन खेलको एकदिवसीय र तीन खेलकै टी–२० शृङ्खला समान २–१ ले जितेको थियो । दुवै शृङ्खलाको सुरुवाती खेल गुमाए पनि उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै नेपालले दुई शृङ्खला आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
याे प्रतियोगितामा नेपालका दुई खेलाडीले विश्व कीर्तिमानसमेत बनाएका छन् । रोहितकुमार पौडेल एकदिवसीयमा अर्धशतक बनाउने कान्छो क्रिकेटर बनेका छन् । उनले भारतका पूर्व ब्याट्सम्यान सचिन तेन्दुलकर र पाकिस्तानी खेलाडी शाहिद अफ्रिदीको रेकर्ड तोडेका थिए । यस्तै सन्दीप जोरा टी–२० मा अर्धशतक बनाउने कान्छो खेलाडी बने ।